MAHAJANGA : Mankalaza ny fahatelo taonany ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa
Tao amin’ny biraony eny Marolaka no natao ny fankalazana ny fahatelo taonan’ ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa eto Mahajanga. 8 juillet 2017
Fiaraha-miala hetaheta tamin’ireo mpikambana sy mpiara-miasa vitsivitsy, toy ny mpanao gazety ary mpandraharaha mpanohana no natao teny.
Nampahatsiahy ny antom-pisian’ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa i Gabin Eugène filohany. Nanambara ihany koa ny asa vitan’ny tambajotra hatramin’ny nisiany. Ady tany no tena betsaka indrindra, arahin’ny olana eny amin’ny Fitsarana, ny olana amin’ny asa, ary olana eo amin’ny mpampanofa trano sy mpanofa. Miezaka manelanelana hatrany ny tambajotra ary anisan’ny angady nanana sy vy nahitana ny fanamorana ny fahazoana tany eny amin’ny tanàna vaovao, ex-champs de tir.
Namaha olana olona maro ihany koa satria betsaka ireo olona manana olana no matahotra miditra biraom-panjakana. “Tsy mibaiko ny mpiasam-bahoaka amin’ny asany izahay fa manamora kosa ny fifandraisan’izy ireo amin’ny vahoaka izay tokony hotompoiny. Mitondra ireo olona manana olana amin’ny tompon’andraikitra afaka mamaha olana azy na manoro lalana azy ireo. Misy aza olana tsy mikasika ny zon’ny mpanjifa mihitsy saingy tonga eto aminay mitaraina ireo olona manana olana ka tsy maintsy miezaka manampy azy ireo izahay”, hoy hatrany Gabin Eugène.
Fanamarihana tsotsotra ihany no natao fa anisan’ny hetsika lehibe karakarain’ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa ny fihaonana miaraka amin’ny tompon’andraikitry ny fananan-tany sy fandrefesan-tany ary ny ao amin’ny Fitsarana satria ao hatrany no miafara ny ady tany. Ny 24 jolay izao no kasaina hatao ao amin’ny tranoben’ny Kolontsaina io hetsika io ary hanasana ny vahoaka rehetra.